तुलना तुलना परीक्षणमा पूल क्लीनर। सहायक सुझावहरू खरिद निर्णय
सुरु बगैचा बगैचा आराम पूल निर्वात
1 तरणताल क्लीनर
2 पूल क्लीनरको व्याख्या
3 कसरी सफा गर्ने काम गर्दछ
5 स्विमिंग पूल या निजी पूल - तुलना मा
6 पूल को एक पूरी सफाई
7 सफाईको लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी
9 जाडो महिना पछि पूल सफाई
10 पसल वा अनलाइन पसलमा?
12 विभिन्न मोडेलहरूको फाइदा र हानि
13 सेटमा खरिद गर्नुहोस्
14 पूलमा स्वस्थ रहनुहोस्
यदि तपाईं आफ्नै पाहुनाको मालिक हुनुहुन्छ भने, पूल सफाईले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। धन्यवाद पूल निर्वात तपाईंको काम धेरै सजिलो बनाउनेछ। यसको प्रयोग प्रभावकारी छ किनभने यसले सतहहरूलाई सतह, फ्लोर र पर्खालहरू सफा राख्न बनाउँछ। नियमित र प्रभावकारी प्रयोगको माध्यमबाट पूल निर्वात र कं, तपाईंको पूलमा स्पष्ट पानी चाँडै पाठ्यक्रमको कुरा हो। तपाईंको स्वास्थ्य र आनन्दको लागि आफ्नो बल प्रयोग गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीको साथ छनोटको साथ मद्दत गर्नेछौं।
पूल क्लीनरको व्याख्या
सम्मान संग व्यापार मा प्रस्ताव पूल निर्वात धनी र विविध हो। यसले तालाब वा पूलको सफाईलाई समर्थन गर्दछ। तपाइँको पूल फिट गर्नको लागि सही मोडेल कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने जान्नुहोस्। त्यहाँ छ पूल निर्वात, जो बस एक पानी नली र बिजुलीको आवश्यकता छैन। स्प्रिड पावरका लागि अवस्थित फिल्टर प्रणाली प्रयोग गर्नुभएका मोडेलहरू पनि बिना बिजुलीबाट हटाइएका छन्। स्किमर वा फिल्टरमा जडानको छनौट। बिजुली, अर्कोतर्फ, मोडेलको लागि आवश्यक छ कि मोडेलको आधारमा, उनीहरूको आफ्नै पंप जसले ब्याट्रि वा विद्युत आपूर्तिबाट आपूर्ति गर्दछ। सबै प्रणालीहरू राम्ररी प्रदूषकहरू जस्तै रेत, सानो ढुङ्गाहरू वा सानो शाखाहरू र पातहरू प्रभावकारी रूपमा सम्भावना गर्न पर्याप्त सशक्त शक्ति हुनुपर्छ। व्यावहारिक पूल निर्वात यसको आफ्नै संग्रह थलोसँग। फलस्वरूप, विदेशी पदार्थहरू बोझ गर्दैनन् फिल्टर सिस्टम, उल्टो ब्रेस्लेटले पल्विक पर्खाल र फर्शको स्क्रबबिल गर्न अनुमति दिन्छ जब, उदाहरणका लागि, जिद्दी एल्गा विकसित भएको छ। सावधानी, तथापि, जब पतली र नाजुक फिल्म पूलमा स्थापित भएको छ त्यसो गर्दा यो क्षतिग्रस्त छैन। रोलर्स वा पाङ्ग्राहरू प्रायः स्थापना गरिएका छन् ताकि सक्शन कपले बिना पछाडि सही दूरी समात्न सक्छ। केहि लागि पूल suckers सेट अप महत्वपूर्ण सामान जस्तै नली, ह्याण्डल को लागि एक्सटेन्सन रोड या लैंडिंग नेट पहिले देखि नै शामिल हो, अन्य मोडेलहरु को अनुसार उनि तदनुसार खरीदना हुनेछ। अनुकूलन परिणाम प्रदान गर्न, नली लगभग 3000 लीटर प्रति घन्टा (3000 एल / एच) को एक क्षमता क्षमता को आवश्यकता छ। फिल्टर पंपको प्रदर्शनले उपकरणहरूको लागि अवलोकन गरेको हुनुपर्छ जुन सक्शन बलका लागि अवस्थित फिल्टर प्रणाली प्रयोग गर्दछ। तिनीहरूको आफ्नै पंपहरूसँग इकाइहरू फिल्टर प्रणालीमा जडान बचत गर्नुहोस् र यसैले छिटो प्रयोग गर्न चाँडै छन्, यसैले चाँडै टाढा टाढा। कृपया नोट गर्नुहोस्, तथापि, आवश्यक पावर जडान वा कि ब्याटरहरूमा मात्र सीमित समयको प्रयोग छ पूल चूसनेवाला ब्याट्री रिचार्ज गर्नु अघि।
कसरी सफा गर्ने काम गर्दछ
पूल रोबोट को सिद्धान्त को समान, स्वचालित रूप देखि काम गर्दछ पूल निर्वात, कम्प्यूटर नियन्त्रणमा भएको पछिल्लो घटनाक्रमले यस्ता उपकरणहरू साथै लन रोबोटहरू सक्षम गर्दछ। आफ्नो आफ्नै सफ्टवेयरको साथ, यी यन्त्रहरूले आफ्नो काम लगभग आफैले जस्तै गर्छन्। दुर्भाग्यवश, तिनीहरू उच्च मूल्य कोटिमा स्थित छन्। यसका लागि, केहि मोडेलहरू एकै समयमा बेसिन पर्खालहरू सफा गर्न सक्षम छन्। व्यक्तिगत घटकहरू होसहरू मार्फत फिल्टर प्रणालीको जडानमा जोडिएको छ। होसहरू पानीमा भरिएको छ ताकि प्रणालीले हवाईमा चिसो गर्दैन। पूल को पानी चूसने र फिल्टर प्रणाली को माध्यम ले पारित गरेको छ, फिल्टर मा गंदगी को कण छोड दिए। म्यानुअल उपकरणको सञ्चालन, जो पानी नलीले सञ्चालनको लागि सञ्चालन गर्दछ, एक फरक प्रणालीमा काम गर्दछ - Venturi प्रभाव। वेंटिरी नजल को माध्यम ले दबाव को तहत पानी को बहती छ। यसले स्थिर दबाब कम गर्छ, जबकि गतिशील दबाव एक नली घर्षण मा बढ्छ। चूषण को दबाव अंतरफलक दबाव द्वारा निर्मित छ। यसले असुरक्षाहरूलाई पूलमा चिसाइदिन्छ। फिल्टर फिल्टरमा यी फिल्टरहरू बाहिर छान्नुहोस्।
पोखरी सुशन पंपहरू तिनीहरूको आफ्नै पंपसँग अवस्थित फिल्टर प्रणालीमा कुनै हस्तक्षेप आवश्यक पर्दैन.
इन्टरलाइन K523CBX "स्कीबा" पूल क्लीनर पूल क्लीनर / भ्याट पूल क्लीनर विज्ञापन
इन्टरलाइन स्कूबा भ्याक, अद्वितीय पूल क्लीनर / पूल क्लीनर सामानहरू
विशेष रूप देखि ओभरफ्लो फिल्टर प्रणाली जस्तै सानो इंसेक्स / बेवेवे बच्चाहरु लाई स्विमिंग पूल संग नरम-दीवार वाला मुक्त-खडे स्विमिंग पूल को सफाई को लागि
Incl। लाइट एल्युमिनियम ह्यान्डल र5एम लचीला चूषण नली पूल साइडमा पानीको इन्लेटको लागि
निर्मित ईन्टर फिल्टर कन्टेनरको साथ।3जडानकर्ताहरू (सबैभन्दा प्रमुख स्विमिंग पूल ब्रान्डहरूको लागि उपयुक्त)
366 सेन्टिमिटरको लागि एक सरल र पूर्ण समाधान।
स्विमिंग पूल या निजी पूल - तुलना मा
विशेष गरी गर्मीको महिनाहरूमा मौसम स्विमिंग पूलको भ्रमणमा लाग्न सक्छ। ताजा ताजा शीतलन युवा र पुराना दुवै संग लोकप्रिय छ। तैरने एक धेरै स्वस्थ खेल पनि छ र पनि बच्चा पानी मा ऊब छैन। तथापि सार्वजनिक स्विमिंग पूल एक परेशानी संग सम्बन्धित छ। यदि यो नजिकै छैन भने लामो यात्रा आवश्यक छ। तौलिए, कम्पास, स्विमिंग पूल, सनक्रिम आदि। अधिकतर मानिसहरू पनि त्यहि विचारमा आउँछन्, र कहिलेकाहीँ स्विमिंग पूल भरिन्छ, यदि अतिबर्द्ध हुँदैन। पहिले देखि नै पार्किंग स्थलमा, जुन लामो समयसम्म खोज्नु पर्छ, तल्ला तर्फबाट के रहनेछ भन्ने खडा छ। सिट चयन गर्दा सर्वोत्तम स्थानहरू पहिले नै परिकल्पना गरिन्छ। विशेष गरी गर्म दिनमा, छाया धेरै खोजी गरिरहनु र शायद नै प्राप्त गर्न सकिन्छ। निस्सन्देह सबैले तिनीहरूको मजा गर्न चाहन्छ। पूलहरू भरेका छन् र शायद हिँड्न सकिँदैन। साथै, यो धेरै शोर छ। पेय पदार्थ वा स्न्याक पाउनको लागि धैर्य र लामो कतारमा चाहिन्छ। स्विमिंग पूलको भ्रमण लागतमा छ।
धेरैले कति सुन्दर सपनाको लागि आफैं आफ्नै आफ्नै पूल मात्र हुनेछ। धेरै घर मालिकहरू यो सपना बगैंचा वा घरमा भेट्छन्। आकार र गहिराईमा उनीहरूका विचारहरू अनुसार। यहां सम्म कि पानी को तापमान तपाईंको आवश्यकताहरु लाई अनुकूलित गर्न सकिन्छ। तपाइँलाई सुखद मनोरञ्जन दिनको लागि आवश्यक सबै कुरा पहिले नै घरमा छ र पेय पदार्थ वा नाश्ता छिट्टै उपलब्ध छ। निस्सन्देह, सार्वजनिक स्विमिंग पूलमा फरक पार्छ थुप्रै असुविधाहरूको उन्मूलन हो। तर धेरैले विश्वास गर्छन् कि पूल मात्र लाखौं को लागी हुन्छन्। यो पाठ्यक्रमको साँचो होइन। आधुनिक निर्माण विधिहरू र सामूहिक उत्पादनले पूलहरूलाई लगभग कसैलाई सस्ती गर्न अनुमति दिन्छ। व्यापारमा चयन धेरै ठूलो छ। स्थापना पनि सजिलो छ, र स्थापना पूलहरूको स्थितिमा कुनै पनि धरतीको काम हुँदैन। एक फ्लैट सतह पर्याप्त छ। व्यापारलाई फिल्टरिंग, हीटिंग, प्रकाश र सफाईको लागि सबै आवश्यक पर्दछ। किनभने यो सार्वजनिक स्विमिंग पूलको दोस्रो भिन्नता हो - पूल र पानीको हेरचाहको मालिकले आफैंको हेरचाह गर्नु पर्छ। व्यापारबाट धेरै उत्पादनहरू, उदाहरणका लागि, मद्दत पूल निर्वात.
पूल को एक पूरी सफाई
एक पूल बनाइयो र तातो भरिएको छ, यो शानदार दृश्य प्रदान गर्दछ र तैरने को निम्तो दिन्छ। तर आफैले पानी र पूल यति सफा छैन। कीराहरु र पराग संग साथै गंदगी, जो लानबाट नुनले स्नानमा ल्याउँदछ, छिट्टै पानी लाई प्रदुषण गर्दछ। तैपनि पूल को पानी को बिना एक्सपोजर को बिना, अल्गा चाँडै सूर्य को तहत बनाइन्छ। पहिलो, तिनीहरू देख्न सक्नु अघि फिसोली पोल फ्लोर मार्फत आफूलाई प्रकट गर्दछ। त्यसपछि फ्लोर र बेसिन पर्खालहरूले पनि पानीलाई हरिलो पार्छ। तथापि लामो समयको लागि, गैर-दृश्यात्मक रोगहरु बनाइयो। व्यापार सावधानीका लागि सबै आवश्यक पर्दछ। विभिन्न फिल्टरहरू, जसले सबै मेनु मेनु मेनु मेनुलाई फिल्टर गर्दछ, बगैंचामा घरबारको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। सबै पूल आकारका लागि फिल्टर पंपहरू पानी परिसंचरण सुनिश्चित गर्नुहोस्। जल उपचार ट्याब्लेटहरू रोगाणु र अल्गाको हत्या गर्न उपयोगी छन्। पूल रोबोट र पूल निर्वात बेसिन फर्श र बेसिनका पर्खालहरू सफा राख्न मद्दत गर्दछ। पूललाई ​​सफा गर्न नबिर्सनु पर्दछ ताकि पूलले यसको क्रिस्टल सफा पानी राख्दछ। त्यसपछि एक पूल सधैँ वर्षको लागि खुशी हुन सक्छ। सिजनमा निर्भर गर्दछ एक पूल मा विभिन्न रखरखाव र रखरखाव कार्य। सिद्धान्तमा, यो पनि एक भूमिका निभाउँछ, चाहे घर मा वा बगैचा मा एक पूल हो, साथ साथै उपयोग को आवृत्ति। यहां सम्म कि कम उपयोग संग, उदाहरण को लागि, यदि पूल तैराकी को लागि प्रयोग गरेन, हेरचाह र सफाई आवश्यक छ। प्राविधिक उपकरणलाई पनि मालिकको ध्यान चाहिन्छ, किनभने तिनीहरू कार्यात्मक रहनु पर्दछ र अत्यधिक लुगा वा क्षति देखाउन हुँदैन। रासायनिक तयारी वा डिटर्जेंटहरूको संभाला सही खुराकमा हुनु पर्छ, कडा रूपमा निर्माता निर्देशनहरू पालन गर्नै पर्छ!
स्टेनब्याक-80107-HAYWARD जादू सफा स्विमिंग पूल क्लीनर, incl। 9,6 एम विशेष नली, सुन्तला सूचक
- आत्म-संचालित - सबै बेसिन आकारहरूको लागि फ्लैट तल्लोको लागि उपयुक्त
स्थापना पूलहरूको लागि आदर्श!
9,6 आरएफएम विशेष नली समावेश
सफाईको लागि महत्त्वपूर्ण जानकारी
घर बाहिरको पूल प्रकृति र मौसमको स्थितिमा अवस्थित छन्। पूल मा धुंध र पत्तियां उडिरहेको छ। नजिकैको रूख पनि पानी फैलिएको शाखा र साना शाखाहरू। यहां सम्म कि चराहरूले उडानको दौडमा कुखुरा खसाल्न सक्छन्, जुन कसैलाई साँच्चै आफ्नो पूलमा राख्न चाहँदैनन्। पानी को लगभग निश्चित (क्षेत्रीय रूपमा अलग) को एक निश्चित अनुपात संग समृद्ध हुन्छ। यो धेरै ठाउँहरूमा विशेष गरी यन्त्रहरूमा र तिनीहरूको पानी पाइपमा बसाइन्छ। यद्यपि जल उपचार एजेन्टरहरू र फिल्टरहरूले राम्रो प्रदर्शन गरेका छन्, पानी नियमित रूपमा जाँच गर्नुपर्छ। पूल मा पानी को एक निरंतर विनिमय देखि बचने को लागि, बेशक, एक पानी को परिवर्तन वास्तव मा आवश्यक हुन सक्छ। सफा र ठीकसँग समायोजित पूलमा, पीएच मानले 7,0 र 7,4 बीच फरक फरक हुन्छ। तलका वा माथिको संस्करणहरू सिफारिस गरिएका छैनन् र सही छैन। उपयुक्त माध्यमहरू, जस्तै, उदाहरणका लागि, अनुदान, व्यापारमा उपलब्ध छन्। आदेशमा सबै अतिथिहरूलाई पूलमा सहज महसुस गर्न, पीएच मानलाई प्रायः जाँच गरीनु पर्छ। उपचार, बालुवा, सानो क्यूबल्स वा अन्य जम्मा पनि जमीनबाट हटाइनु पर्छ ताकि सूक्ष्म जीवविज्ञानहरू त्यहाँ बसोबास गर्दैनन्। यसैले एक राम्रो एक हो पूल निर्वात एक स्विमिंग पूल को लागि वैक्यूम क्लीनर को कालीन मा। यहां सम्म कि एक मजबूत फिल्टर प्रणाली बेसिन तल को सफाई द्वारा अभिभूत छ। एक पूल निर्वात व्यावहारिक र सजिलो सजिलो हो, जुन नियमित अनुप्रयोग हो। यहाँ बेसिन पर्खालहरू, कोनेहरू वा अन्यथा पहुँच गर्न गाह्रोहरू यो सफा गर्न सजिलो छ।
एक पूल क्लीनरको रूपमा राम्रो हुन सक्छ, यसको अतिरिक्त र अन्य पूल मर्मत एक फरक विनाश हुन पर्छ। क्लोरीनको साथ तपाईंले स्वच्छ पानीको अवस्था पाउनुभयो भने, यदि ठीकसँग डिस गरिएको हुन्छ।
जाडो महिना पछि पूल सफाई
यदि तापमान वृद्धि हुन्छ र तातो महीनाहरू सही छन् भने, तपाईंले आफ्नो स्विमिंग पूल फिर्ता फिट गर्नुपर्छ। तपाईंले सफा पानीमा आराम गर्नु अघि विभिन्न कार्य कदम आवश्यक छ। सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरू तपाईंको लागि संक्षेपमा छन्:
आवरण हटाइने पछि, पूलमा फ्लोर र पर्खालहरू सफा गर्न सक्दछ। पानी निकास गर्नुहोस् र नेटको साथ सबैभन्दा ठूलो अशुद्धता (पत्तियां, टाईग्स, कीराहरू) एकत्र गर्नुहोस्। पानीको ड्रेनेजले गहिरो पानीको पम्पसँग राम्ररी काम गर्दछ। एक सानो अवशिष्ट पानी पूल मा रहछन।
अब आउछ पूल निर्वात सक्रिय प्रयोगको लागि। यसले लेम, ग्याँस किनारा र अल्गा को जमाव र राम्ररी बुझाउँछ। एक विकल्प को रूप मा, सफाई नली र सफाई कपडे संग गरिन्छ, तर यो हड्डी को काम को सिफारिश छैन। द्वारा सफाई को विपरीत पूल निर्वाततपाईलाई चाहिन्छ सफाई कपडा थप क्लीनरहरू, जुन आवश्यक अनुकूल रूपमा अनुकूल छैनन्।
त्यसपछि बाँकी पानी पूर्णतया भत्काइएको छ।
पाइपहरू, फिडरहरू, मुहरहरू, फिल्टरहरू, स्किमहरू र पम्प जाँच गर्नुहोस्।
पहिरनका सामानहरूको प्रतिस्थापन हुनुपर्छ।
रेत फिल्टरको साथ कारतूस फिल्टरको साथ क्वार्ट्ज बालुवा परिवर्तन गर्नुहोस्।
त्यसपछि दीवार र फर्शलाई उपयुक्त निस्सन्देहीसँग ब्रश गर्नुहोस्। Algicide अक्सर प्रयोग गरिन्छ।
पानीको साथ फिल्टर पंप भर्नुहोस्। त्यसपछि स्विच गर्नुहोस् र 10 लाई 15 मिनेटमा फ्लश गर्नुहोस्।
पूल भरिएको पछि पानीको गुणको हेरविचार गर्नुहोस्। तिनीहरू व्यावसायिक granules र क्लोरीटेड गोलहरु मा पाइन्छ।
पसल वा अनलाइन पसलमा?
उपलब्ध छन् पूल निर्वात विशेष स्टोरहरूमा, राम्रो भण्डार गरिएको हार्डवेयर भण्डारहरूमा र निश्चित रूपमा इन्टरनेटमा। विशेष गरी इन्टरनेटमा धेरै राम्रो मूल्य फाईदा अन्य प्रदायकहरूको विरुद्धमा हेर्न सकिन्छ। छनौट ठूलो छ, जुन निश्चित रूपमा फायदा हो किनभने यी उत्पादनहरू स्टकमा उपलब्ध छन्। नयाँ नयाँ पदोन्नति अफर र छुटहरू धेरै पैसा बचत गर्छन्। आवश्यक प्राविधिक जानकारी पनि उपलब्ध छ। व्यावहारिक प्रत्येक उत्पादनमा ग्राहक रायहरू छन्, किनभने तपाइँ एक खरीददारको रूपमा यहाँ उनीहरूको खरिद निर्णयमा उद्देश्य राय समावेश गर्न सक्दछ। इन्टरनेटमा, ग्यारेन्टी दावीहरू विशेषज्ञ व्यापारमा भएकाहरूसँग समान छन्। इन्टरनेटमा खरिद गर्दा तपाईलाई पैसा बचाउनुहुन्छ, अनावश्यक तरिका, सल्लाह र तनावको लागि कष्टप्रद पर्खाइ।
पूल सूटहरू प्राय: केवल मात्र मात्र प्रयोग गरिने पूलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। बगैचा तालाबका लागि विभिन्न मोडेलहरू पनि उपयुक्त छन्। वैक्यूम क्लीनर वा वैक्यूम क्लीनर को रूपमा पनि जान्छ।
विभिन्न मोडेलहरूको फाइदा र हानि
म्यानुअल पूल क्लीनरहरू केही आकर्षक फाइदाहरू छन्। यदि तपाईं आफ्नो पूल क्लीनरमा धेरै खर्च गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईलाई निश्चित खरीद लागत (अनुमानित 10 बाट, यूरो) बाट प्रभावित हुनेछ। कष्टप्रद रखरखाव कार्य अब आवश्यक छैन र व्यक्तिगत भागहरूमा कुनै लुगा छैन। उदाहरणका लागि, कठिन ठाउँहरू सफाईको लागि सजिलै सजिलै पुग्न सकिन्छ रेलिङ र सीढीहरू, यी मोडेलहरू प्रयोगकर्ता-अनुकूल छन्। आवश्यक शरीर लोड र उच्च समय खर्च व्यर्थ छ। सफाई पछि, एक ब्याकवाश स्थान लिनु पर्छ।
अर्मी-स्वचालित पूल क्लीनर पूलमा पर्खालहरू पनि सफा गर्न सक्दछ। मर्मत कार्यको लागि कुनै पनि आवश्यकता छैन। फर्श सफाई स्वतन्त्र हुन्छ। पानीको राम्रो चक्रमार्फत, साधनहरू राम्ररी वितरण गरिन्छ। यी मोडेलहरूले आफ्नो काम धेरै राम्ररी काम गर्छन्। लचीलापनको कमी एक हानि छ। नतिजाको रूपमा, पछिल्लो सफ्टफर्म अक्सर म्यानुअल रूपमा आवश्यक छ। फिल्टर प्रणालीको प्रदर्शनको सन्दर्भमा निर्भरता अवस्थित छ। सीढी र सीढ़ीहरूमा ब्रेक गर्न सम्भव छ र स्किमर स्विच गर्न सम्भव छ।
स्वचालित पूल क्लीनर अन्य मोडेल मा महत्वपूर्ण फायदे संग समझाए। सफाई, चिसो, र फैलाउने यी उपयोगी सहयोगीहरूको लागि सजिलो छ। तपाईं स्वचालित रूपमा र पर्यवेक्षण बिना पूल मा सफाई गर्न सक्नुहुन्छ। पूल फर्श सधैँ सफा रहन्छ, र सफा र हेरविचार उत्पादनहरू पनि वितरण गरिन्छ। यहां सम्म कि पूल पानी फिल्टर गरिएको छ। दुर्भाग्यवश, यो मोडेलहरू saltwater पूलहरूको लागि उपयुक्त छैन। तिनीहरू सीधा फ्लोर चाहिन्छ र खरिदमा उच्च लागतसँग सम्बन्धित छन्।
सेटमा खरिद गर्नुहोस्
केही निर्माताहरूले पूल सफाईको लागि आकर्षक सेट प्रस्ताव गर्छन्। यस्तो सेटमा सामान्यतया पूल निर्वात, एक पत्ते नुक्स र एक दूरबीन पल्ट। विशेष गरी जब पूल धेरै गहिरो हुन्छ, दूरबीन पट्टी व्यावहारिक छ। फर्श र पर्खालहरूमा सफाईको लागि आदर्श। सतह सफाईको लागि शुद्ध पूल मर्मतको लागि अपरिहार्य सहायक उपकरण हो। शाखाहरू, पत्ते र अन्य तरकारीहरू उत्कृष्टसँग यसको साथ हटाउन सकिन्छ। यस तरिकामा, तपाईंले सफाईको लागि एक पूर्ण हेरविचार प्याकेज पाउनुहुनेछ।
पूलमा स्वस्थ रहनुहोस्
त्यसैले तपाइँ र पूलको सबै अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई नुहाउने बेला स्वस्थ रहन्छ, तपाईलाई निश्चित रूपमा केवल एक खरीदको बारेमा भन्दा बढी चाहिन्छ पूल निर्वात लाग्छ। फंगु, जीवाणु र रोगाणुहरूले प्रतिकूल रूपमा पूल पानीको गुणलाई असर पार्ने सम्पत्ति छ। यदि विलुप्त भएन भने, यी "मलगायत" अनियन्त्रित हुन्छन् र अन्ततः तपाइँलाई स्वास्थ्यमा हानि दिन्छ। पूल क्लीनरलाई उपयुक्त डिस्फिगरेसनसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण छ, त्यसपछि एक हाइजियनिक पूल प्रयोग हुन सक्छ। एक को लाभ पूल निर्वात , यो नियमित रूपमा यसको उपयोग द्वारा रसायन को लागि मांग को कम गर्न सक्छन्। पूल क्लीनर, फर्श, पर्खाल र सतहहरू राम्ररी सफा गर्न सकिन्छ, तर यसले पानीको डिलिमेसनलाई प्रतिस्थापित गर्दैन।
सूर्यको किरणहरूको लागि धन्यबाद, पानीमा पीएच मानमा पनि परिवर्तन छ। फंगु, ब्याक्टेरिया र अल्गाको लागि, श्लेराफेनल्याण्डको एक साँचो भूमि, विशेष गरी, तथापि, यदि शरीर हेरचाह उत्पादन र सूर्यको सुरक्षा संरक्षण उत्पादनहरू। यहाँ क्लोलोनशन शॉक गरीएको साथ साथै डेकलगिन वा अल्गाइस्किड को सिफारिश गरिन्छ।
अझ खराब पीएच पूलमा पानी विभिन्न समस्याहरू समाधान गर्दछ। कम मूल्य जस्तो एक उच्च मूल्य तपाईंको पूल स्वास्थ्यमा फ्लोटहरू हानिकारक हुन्छ। चिन्ताजनक छाला, आँखा जलन र छाला समस्याहरू अप्रिय भन्दा बढी छन्। यदि पीएच मान धेरै कम छ भने, उपकरण छिट्टै क्षति हुनेछ। उदाहरणका लागि, पंप प्रभावित हुन्छ र सम्पूर्ण प्रविधिमा सरोकार देखा परेको छ। मोर्टार अब जोडीहरू बाहिर तोड्न सुरु हुँदैछ। पूल मालिकको रूपमा तपाईंले निश्चित रूपमा एक मीटर खरिद गर्न सोच्नु पर्छ।
सुझाव: त्यहाँ धेरै स्वचालित सफा यन्त्रहरू जस्तै छन् लुगा धुने रोबोट वा रोबोट निर्वात जसमा तपाईं हाम्रो मा पाउन सक्नुहुन्छ आरएसएस फीडहरू धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छ।
Intex Rechargeable Hand Held वैक्यूम क्लीनर सूचक
धुँवा र माटो हटाएर स्पा पानी सफा राख्छ
मजबूत निर्मित-नी-MH रिचार्जयोग्य ब्याट्रीमा
238,8 सेमी लाइटर दूरबीन एल्यूमिनियम शाफ्ट
USB केबलले सुविधाजनक चार्जिङको लागि समावेश गर्दछ
एट्रिब्युट मान: पानीमा डुबाउने बिरूद्ध सुरक्षा बढाउनको लागि IPX8 वाटरप्रूफ स्विच।
इंटेक्स डिलक्स पूल रखरखाव किट - पूल सहायक उपकरण - पूल सफाई किट - 5-partsDisplay
पत्थर र फ्लोरिंग नेटको साथमा
239 सेन्टिमिटरको लम्बाइको साथ एल्युमीनियम दूरबीन पट्टी
Intex सफाई पूल किरा, दूरबीन ह्यान्डल 279 सेमी, दृढ काठ वा जमीन नेट, बेक ब्रश, निर्वात टाउको एकीकृत फिल्टर र चूषण नली लम्बाइ 750 सेमी हे 32 मिमी संग: आपूर्ति को स्कोप
यो कम्तिमा 3.028 l / h आवश्यक फिल्टर फिल्टर प्रदर्शन हो
इंटेक्स ओटो पूल क्लीनर - स्वचालित उच्च प्रदर्शन पूल फ्लोर क्लीनर - केवल 38 मिमी नली फिटिंग संकेतक को लागी
Ø 38 मिमी नली जडान र गेट वाल्वका साथ सबै INTEX पूलहरूको लागि शक्तिशाली तल्ला क्लीनर।
सफाई वेंटिरी सिद्धान्त अनुसार गरिन्छ।
कम से कम 5.678 l / h को उत्पादनको साथ फिल्टर प्रणाली इष्टतम फर्श सफाईको लागि आवश्यक छ।
नमक पानीको लागि उपयुक्त।
केवल INTEX पूलहरूको लागि वेंटिरी सिद्धान्तसँग शक्तिशाली क्लीनर
शक्तिशाली 1400 वाट मोटर संग प्रभावी मिड हटाउन
स्वचालित सक्रियता र निर्मित समयमा नियन्त्रण द्वारा खाली
कम्पैक्ट निर्माणद्वारा मात्र 30 लीटर ट्यांक आवश्यक छ
3 चूषण नलिकाहरु संग: संयुक्त, अल्गा र चर यूनिवर्सल नलिका (2-10 मिमी)
4 एम चूषण नली र2मीटर नाली नली सहित
विल्टेक पोखरी भ्याकुम क्लिनर पूल भ्याकुम क्लीनर माटो पोखरी क्लीनर 1400W भिजेको सुख्खा स्वचालित नाली सूचक
यो पोखरी भ्याकुम क्लीनरले पोखरी र पोखरीको पानीको सजिलो सफा गर्न अनुमति दिन्छ
1400kPA सक्शन पावरको साथ शक्तिशाली 16 वाट शक्ति
व्यावहारिक स्वत: नालीको साथ
भित्री र सुक्खा भित्री र बाहिरी क्षेत्रहरूको वैक्युमिंगका लागि उपयुक्त
विस्तृत सामानहरू सहित
time4wellness Wels I वा Wels II पूल भ्याकुम ब्याट्री वैकल्पिक वैकल्पिक रूपमा कम्फर्ट वा कम्फर्ट प्लस टेलिस्कोपिक पोल (क्याटफिश I, टेलिस्कोपिक पोल बिना) डिस्प्ले
रिचार्जेबल // वायरलेस // फ्लोर, सिढी र कुनाहरूको सटीक सफाई
हटाउन योग्य कन्टेनर र फिल्टर गर्नुहोस् // हल्का हल्का र काम गर्नुहोस् // ह्यान्डल र संलग्न गर्न सकिने पुल-आउट एल्युमिनियम पट्टी
सबै सतहहरूमा उपयुक्त // लिथियम ब्याट्री 11,1 V // ब्याट्री लाइभ अप 60 मिनेट सम्म // // एक्स.एन. उपयोग को गहिराई3मीटर
परिचालन तापमान4° C 35 ° C मा // // वजन 1,8 किलो // प्याकेज वजन 2,3 किग / एल्युमिनियम रड एक्सएनएमक्स एक्स एक्सएमएमक्स सेमी
आयाम पूल वैक्यूम 63,5 एक्स 20 एक्स 29,2 सेमी // आयाम ब्रश हेड 7,3 एक्स 19,6 एक्स6सेमी // पैकिंग आयाम 55 X 19 एक्स 26 सेमी
प्रमोदवन पूल फ्लोर क्लीनर ब्रश DeLuxe, ब्रश सफा गर्ने, म्यानुअल पूल वैक्यूम क्लीनर, मजबूत पूल ब्रश संग ब्रशलेस, मात्रा: 1 टुकडा प्रदर्शन
बलियो डिजाइन: भारी फलाम ब्रश सञ्चालन गर्दा, यन्त्रलाई दिक्क लाग्ने कुनै अतिरिक्त प्रयास आवश्यक छैन, तैपनि तैरिङ पूलहरूको म्यानुअल सफाईको लागि यो आदर्श बनाइन्छ।
सावधानीपूर्वक सफाई: यसको तल र छेउका लागि धन्यवाद, पूल तल वैक्यूम क्लीनर धेरै राम्रो तरिकाले प्रत्येक पूल सफा गर्छ।
आपूर्तिको दायरा: 1 x फ्लोर क्लीनर ब्रश DeLuxe, परेडिस पूल बाट बलियो पूल ब्रश।
असामान्य: पूल ब्रश लगभग 29 मिमी को भित्र व्यास संग दूरबीन पोल फिट हुन्छ र यसैले लगभग सबै मानक दूरबीन पोल (डिलीवरी मा शामिल नहीं)।
डबल नली जडान: एकीकृत नली जडानमा 32 वा 38 मिटर फिट व्यायाम पूलमा स्विमिंग पूल होस (वितरणमा समावेश नली)।
केमोफार्म तल भ्याकुम पुलब्लास्टर क्याटफिश पुल क्लीनर 477214 सूचक
Bestway Flowclear बैटरी संचालित पूल निर्वात AquaScan पूल आकार को लागि 305 सेमी डिस्प्ले सम्म
लेख संख्या: 58340
हाइड्स वा बिजुली केबल्स बिना स्किशन पावर उत्पन्न गर्न ब्याट्री संचालित पंप
Ergonomic दूरबीन ह्यान्ड लक संग तंत्र; सरल पुश बटन सञ्चालन
सरल ग्लाइडिङको लागि तलको रोलरहरू; लम्बाई: 1,50 मि
आठ ए.ए. ब्याटरहरू चाहिन्छ (समावेश छैन); सजिलो खाली मिट्टीको बैग समावेश गर्न आसान छ, कुनै उपकरण आवश्यक छैन
पूल रोबोट परीक्षण गाइड
अघिल्लो लेखग्रिल क्लीनर
अर्को लेखलन मल